ओलीले सत्ता र शक्तिको आडमा धम्काउन थालेः प्रचण्ड
पोखरा। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई धम्काउने, तर्साउने तथा पार्टी एकताको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भइरहेको बताएका छन्। पोखरामा आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले यस्तो कार्य बन्द गर्न आग्रह गरे।
उनले जनतालाई भेडाबाख्रा नठान्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी पनि दिए। प्रचण्डले भने, ‘म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु कमरेड केपी ओलीलाई। तपाईँले हास्यव्यंग्य गरेर मान्छेलाई प्रहसन गराएर दुनियाँलाई उल्लू बनाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नुभएको छ? जनतालाई भेडाबाख्रा ठान्नुभएको छ तपाईँले? हजारौँ सहिदहरूको बलिदान, त्याग र तपस्यालाई ठट्टा ठान्नुभएको छ?’
उनले केपी ओलीभन्दा माधवकुमार नेपाल हजार गुणा इमान्दार भएको बताए। प्रचण्डले माधव नेपाललाई पञ्चायत विरोधी आन्दोलनबाटै चिनेको बताए। ‘केपीभन्दा माधव नेपाल हजार गुणा इमान्दार, हजार गुणा पारदर्शी, हजार गुणा सुशासनको पक्षधर,’ उनले भने।
प्रचण्डले माधव नेपाल ओलीभन्दा हजार गुणा बढी क्रान्तिकारी भएको समेत बताए। गणतन्त्रबारे ओलीको धारणा सबैले बुझेको बताउँदै उनले भने, ‘केपी ओलीको उद्देश्य इमानदारिताको रहेनछ। नाङ्गै हुने छलछामको तरिका अपनाउने रहेछ।’
प्रचण्डले कसैले भन्दैमा एकता नबिग्रने बताए। ‘म माधवको पक्षमा गएकै हो। त्यसो भनेर के बिग्रन्छ ? माधवजी मेरो पक्षमा, म माधवजीको पक्षमा। एकता गरेको हो नि हामीले, ओर्जिनल सहमति हो,’ उनले भने। आफूहरू जालझेल गर्नेको पक्षमा नरहेको पनि उनले बताए। तर, ओलीले भने पार्टी एकता पछि बसेको पहिलो स्थायी कमिटी बैठकबाटै घच्याकघुच्चुक गर्न थालेको बताए।
माओवादी र एमाले एकीकरणमा वामदेव गौतमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए। वामदेवकै पहलकदमीमा पार्टी एकीकरण अगाडि बढेको पनि प्रचण्डले बताए। ‘एकताको प्रस्ताव लिएर म गएको हो, केपी ओली आएको होइन तपाईँहरूलाई प्रस्ट होओस्,’ प्रचण्डले भने। तर, ओलीले झुट बोल्ने गरेको प्रचण्डले बताए।
संसदमाथि प्रधानमन्त्रीबाट खड्ग प्रहार भयोः राई
विधि र पद्धति नमान्नेहरू पार्टीबाट बाहिरिएः पुन
परराष्ट्रमन्त्री भारतबाट रित्तो कुटुरो बोकेर फर्किएः डा. भट्टराई
संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउने एक मात्र विकल्प संसद पुनस्थापना होः कोइराला
‘गणतन्त्र, संघीयता जोगाउन नागरिक समाज र राजनीतिक दल एक भएर आन्दोलनमा आउनुपर्छ’
केपी ओलीका कारण लोकतन्त्र र संघीयता खतरामा : राजेन्द्र महतो
नेकपाकाे माघ ९ मा जनप्रदर्शन, माघ १६ मा केन्द्रित जनसभा
देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर
निर्वाचन आयोगको कायैशैलीप्रति प्रचण्ड-नेपालको शंका
सेयर किन्ने र बेच्ने उपयुक्त समय कुन हो ?
ओलीको रणनीति : भन्ने चुनाव, गर्ने संकटकालदेखि राजाको शासनसम्म !
ओलीको चिन्तन र कार्यशैली देशका लागि हानिकारकः नेपाल
भारतले भन्यो : ‘मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमा र नयाँ नक्शाबारे कुरा हुँदैन’